Orinasa manana antoko politika : Tsy mila mandoa hetra sy JIRAMA -
AccueilRaharaham-pirenenaOrinasa manana antoko politika : Tsy mila mandoa hetra sy JIRAMA
Nihoby fandresena ny antoko TIM tamin’ny alalan’ny solombavambahoaka Félix Randriamandimbisoa fa misokatra indray araka ny voalazany tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mey ny orinasa AAA sy ny Tiko, ary miverina ihany koa ny onjampeo MBS. Nambaran’ity depiote ity fa fandresena goavana ho an’ny antoko TIM sy ny mpiara-dia aminy izany, Guy Rivo Randrianarisoa rahateo koa moa no voatendry ho minisitry ny Indostria amin’izao governemanta Ntsay Christian izao. Fa mbola nampian’ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa fanamby hafa ankoatra ireo efa voalaza etsy ambony ireo anefa ny tanjona, dia ny hialan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina eo amin’ny fitondrana, ary ireo depiote HVM ao anatin’ny governemanata iaraha-mitantana.
Raha tsiahivina kely anefa ny fototry ny raharaha ka nahatonga ny fanjakana nanakatona ny orinasa AAA sy ny Tiko dia noho ireto manaraka ireto: voalohany, ananan’ny fanjakana trosa hetra mitentina hatrany amin’ny 600 miliara ny orinasa Tiko, hetra tsy naloan’ity orinasa ity nanomboka tany amin’ny fitondran’i Marc Ravalomanana. Teo ihany koa ny tsy fandoavana faktioran’ny JIRAMA izany mitentina hatrany amin’ny 20 miliara Iraimbilanja, ary ny halatra herinaratra voalazan’ny manam-pahefana fa sarona tao amin’ny orinasa AAA, sns.
Tsy azo antoka araka izany ny asa fandraharahana eto amintsika, ary maneho ny fisian’ny mizàna tsindriana ila eo amin’ny samy mpandraharaha. Tsy voatery mandoa hetra sy faktioran’ny JIRAMA araka izany izay orinasa manana antoko politika. Amin’ny alalan’ny fifanarahana politika fotsiny izany dia ampy hialana amin’ny fandoavan-ketra sy faktioran’ny JIRAMA, izany hoe, manana tombontsoa manokana mihoatra ny hafa ny orinasa miara-dia amina antoko politika.
Miresaka ady amin’ny kolikoly ireo solombavambahoaka etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mey, toraka izany koa ny Bianco. Azo ambara ho kolikoly avo lenta ihany anefa izao fahafahan’ny orinasa Tiko sy AAA misokatra izao, tsy manefa ny hetrany, ary koa tsy mandoa ny saran’ny fandaniana herinaratra. Natokana ho an’iza irery ihany izany ny fanarahan-dalàna eto amin’ity tanindrazana iombonana ity?
Ny faran’ny herinandro lasa teo no nanainga hihazo an’i Londres, renivohitr’i Angleterre ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo delegasionina izay niara-dia aminy, tanjona amin’ity dian’ny filoham-pirenena ity moa ny fanokafana ny masoivohon’i Madagasikara ao Londres. ...Tohiny